वातावरणिय दृष्टिमा २०७७ साल - SatyaPatrika
वातावरणिय दृष्टिमा २०७७ साल
२०७७ चैत्र ३०, सोमबार प्रकाशित
वि.स. २०७७ हामीसंग बिदा हुदैछ । यो साल अन्य वर्ष जस्तो सामान्य रुपमा नभई मानिसको जीवनमा विर्सने नसकिने समयको रुपमा रहेको छ । विस्वप्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणसंगै शुरु भएको २०७७ साल वर्षैभरि यसबाट पिडित रहदा त्यसले विस्वकै आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । सालको शुरुमा हामी जुन अवस्थामा थियौ, साल सकिन थाल्दा कोरोनाको नयाँ स्वरुपहरु देखिएकोले चैत्रको अन्त्यतिर झन् बढी त्रसित बनाएको छ । हामी नेपालीले वर्षभरि आर्थिक, सामाजिक र साजनैतिक क्षेत्रमा धेरै प्रतिकुलता बेहोरेका छौ । प्रस्तुत लेखमा वि.स. २०७७ सालमा नेपालको वातावरणिय क्षेत्रमा देखिएका प्रभावहरुको चर्चा गरिएको छ ।
२०७७ शुरु हुदा देशमा कोरोनाको सन्त्रास उच्च थियो । लकडाउन चलिरहेको थियो । उद्योग, व्यवसाय ठप्प थिए । मानिसहरु घर फर्किरहेका थिए । संख्यात्मक रुपमा कोरोना संक्रमित कम भएपनि डर उच्च थियो । दशैँपछि चहलपहल बढेपनि वर्षका शुरुवाती महिनाहरू सुनसान थिए । यस्तो अवस्था मानिसको लागी कष्टकर भएपनि वातावरणको लागि भने सुखद थिए । उद्योग, यातायात नचलेको कारण प्रदुषण घटेको थियो । लामो समयदेखि तुवालोले ढाकिएको उपत्यकाबाट सफा आकाश र सफा हिमाल देखिएको, नदीहरुमा बग्ने पानी सफा देखेका खबरहरु आएका थिए । देशका सबै शहरी क्षेत्रमा धुव, धुलो, चर्को ध्वनि हटेको थियो । मानिसहरुका गतिविधिहरु कम भएको र धेरै मानिसहरु गाउँ फर्किएकोले शहरमा फोहरमैला निकै कम भएको थियो । उद्योग व्यवसाय ठप्प हुदा पेट्रोलियम पदार्थको माग, आयात र उपयोग कम हुदा पनि वातावरणिय क्षेत्रमा फाइदै भएको थियो ।
मानिसहरु गाउँ फर्कदा गाउँको वातावरणमा पनि केहि सुखद संकेतहरु देखिएका थिए । लामो समयदेखि बाँझो रहेका गाउँका खेतबारिहरुमा खनजोत गरि खेतीपाती गर्ने लहर चलेकोले जमिनले स्याहार पाउन थालेको थियो । छोटो समयमै गाउँका पुराना सिचाई प्रणालीको सुधार, पानीका श्रोतहरुको संरक्षण, प्रकोप व्यवस्थापनका तयारि जस्ता कामहरु हुन थालेका थिए । मानिसहरु घरबाट कमै निस्कने गरेकोले वनमा मानिसहरुको उपस्थिति कम देखिन्थ्यो । विगतका वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष वनमा चराचुरुंगीको चिरविर र अन्य वन्यजन्तुहरूको चहलपहल महसुस गरिएको थियो । २०७७ का शुरुका महिनाहरुमा डढेलोका घटनाहरु कम देखिएका थिए । यति हुदाहुदैपनि रोजगार गुमाएका विपन्न समुदायका मानिसहरुले हातमुख जोर्नको लागि वनजन्य वस्तुहरु र वन्यजन्तुको चोरि निकासीमा संलग्न भएको,सार्वजनिक जग्गा, नदि किनारा र वनक्षेत्र अतिक्रमण गरि खेतबारी र घर टहरा बनाएका खबरहरु समेत आइरहे । सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र कोरोनाको विरुद्धमा लडिरहेको समयमा वन्यजन्तु र काठ तस्करहरुले भने मौकाको फाइदा उठाएको समेत भेटियो।
लकडाउन चलिरहेको समयमा प्रदुषणमा कमि आएको भएपनि मङ्सिर पछिका समयहरु भने नेपाली आकासका लागि सुखद रहन सकेनन् । पुषको पहिलो साता काठमाडौं उपत्यका विस्वमै प्रदुषित शहरहरु मध्ये दोश्रो स्थानमा आएका खबरहरु आए । उपत्यकाको वायु अस्वस्थकर भएको कारणले सरकारले बिहानी र सन्ध्याकालीन भ्रमण नगर्न, सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन सुचना नै जारि गरेको थियो । लामो समयसम्म पानी नपरेकोले आकाश खुल्न नसकेको अवस्थामा चैत्रको शुरुवात देखि नै देशभर डढेलोका प्रकोपहरु बढेकोले वायु प्रदुषणको अवस्था चिन्ताजनक स्तरमा पुग्यो । विगतमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र वायु प्रदुषणको समस्या देखिने गरेकोमा यो वर्ष नेपालका अधिकांश स्थानमा यस्तो समस्या देखियो । वायु प्रदुषणको अवस्था चिन्ताजनक भएपछि नेपाल सरकारले चैत्रको तेश्रो साता देशभरिका शैक्षिक सस्थाहरु ४ दिनका लागि बन्द ग¥यो । चैत्रको अन्तिम सातापनि वायु प्रदुषणको अवस्था गम्भिर नै रहेको छ । छाला र आँखा पोल्ने, स्वास फेर्न गाह्रो हने, दृश्यावलोकनमा कठिनाई हुने समस्याहरु नागरिकले भोगिरहेका छन् । पानी नपर्दासम्म यो अवस्था रहिरहने देखिएको छ ।
कोरोनाले दुख दीइरहेकै समयमा हामी नेपालीहरुले प्राकृतिक विपत्तिबाट समेत ठुलो सास्ती र क्षति भोग्नुप¥यो । पछिल्ला ४ वर्षहरु मध्ये २०७७ सालमा प्राकृतिक विपत्तिबाट बढी भौतिक र मानवीय क्षति भयो । २०७७ वैशाख १ देखि यो लेख तयार गर्दासम्म (चैत्र २८) प्राकृतिक प्रकोपका ४०९५ घटनामा ५९० जनाको मृत्यु भयो भने सोहि घटनामा ११५६ जना घाइते र १०२ जना बेपत्ता भए । सबैभन्दा बढी क्षति मनसुनका अघिल्ला ४५ दिन भित्र भयो । जेठ ३० देखि साउन ११ सम्मको ४५ दिने अवधिमा १६१ जनाले प्रकोपको कारण ज्यान गुमाउनु प¥यो । सोहि अवधिमै पहिरोमा परेर म्याग्दीका २९ जना,तनहुका १३ जना र जाजरकोटका ११ जनाले ज्यान गुमाए । बझांग, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, कास्कीमा बाढी पहिरोबाट बढी क्षति भयो । तुलनात्मक रुपले पहाडी जिल्लाहरुमा भन्दा तराईका जिल्लाहरुमा यो वर्ष प्राकृतिक प्रकोपको असर कम देखियो ।
वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा डढेलोको असर कम देखिएपनि चैत्र लाग्दानलाग्दै नेपालमा डढेलोका घट्नाहरुमा तीव्रता आएको छ । पछिल्ला १० वर्षमा एकै दिनमा धेरै ठाउमा डढेलो लागेको वर्ष बनेको छ २०७७ साल । यहि चैत्र २१ देखि २२ गतेको २४ घन्टामा नेपालका विभिन्न ७९८ स्थानमा डढेलो लागेको वन डढेलो पहचान तथा अनुगमन प्रणालीका सुचनाले देखाएका छन् । यो चैत्रका २८ दिनमा मात्र ३८ सय स्थानमा डढेलो लागेको थियो । लामो समयसम्म पानी नपरेकोले अब मनसुन शुरु नहुदासम्म डढेलोका घटना र क्षति बढ्ने निश्चित छ ।
डढेलोको कारण जैविक विविधताको विनास र पारिस्थितिक पद्धतिमा असर मात्र परेको छैन, वायु प्रदुषणका समस्या पनि बढाएको छ । अहिले नेपालका वनसँग जोडिएका धेरै वस्तीहरु वनबाट आउने धँुवाले ढाकिएका छन् र दैनिकी असहज बनिरहेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा जंगलको डढेलो वस्तीमा फैलिदा वस्तीहरु जलेको खबरहरु आइरहेका छन् । अर्घाखाची, प्युठान, गुल्मी जस्ता पहाडी जिल्लामा भएका डढेलो र आगलागीले त्यहाँ पानी संकट बढ्ने, बसाइसराई बढ्ने जस्ता सम्भावनाहरु बढेका छन् । तराइमा अहिलेसम्म हावाहुरी नचलेकोले वनको आगो वस्तीमा फैलिएका खबरहरु आएका छैनन्, तर गर्मि बढ्दै जादा र हावाहुरीका घटनाहरु बढ्दै जादा तराइका वनसँग जोडिएका वस्तीहरु समेत आगलागीबाट जोगिन निकै मेहनत गर्नुपर्ने निश्चित छ ।
२०७१ सालमा निकै प्रचारका साथ आएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७७ सालको मध्यमा आइपुग्दा खारेज भयो । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट चामत्कारिक फाइदा हुन्छ भन्दै सबै क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्न मरिहत्ते गरेर लागेपनि तराई र चुरे क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गरी प्राकृतिक वन विनाश गरिएकोले वन्यजन्तुको वासस्थान लोप हुन गई सकटापन्न वन्यजन्तहरु लोप भएको, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा व्यापक वृद्धि भएको र रुख कटान भएका क्षेत्रहरुमा अतिक्रमण र बसाई–ुसराई भई सामाजिक द्वन्द्व समेत वृद्धि भैरहेका, काठ प्रजाति बाहेक अन्य प्रजातिका वनस्पतिहरु मासिएको, जैविक करिडोरमा समेत कार्यक्रम लागु गर्दा वन्यजन्तुहरु नासिएका र अन्यत्र सरेका, जलाधार क्षेत्र र सिमसार क्षेत्र विनाश भएको भनि सबै क्षेत्रबाट यापक विरोध भएपछी सरकारले बाध्य भएर कार्यविधि र कार्यक्रम खारेज गर्नुपरेको हो । कार्यविधि खारेज भएपनि बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन लागु भएका क्षेत्रको वनको व्यवस्थापन अब कसरि गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रमहरु नआएकोले संरक्षण क्षेत्रमा अन्यौलता कायमै छ ।
लकडाउनको कारण वन क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरु आउन नसकेपनि यो क्षेत्रले डढेलो बाहेक अन्य कारणले चालु वर्षमा ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेन । यो वर्षमा करिब २०० वटा नयाँ सामुदायिक वनहरू थपिए । हिमाली क्षेत्रमा थप हिउँ चितुवाहरु भेटिए भने तराइ र चुरे भन्दा बाहिर पहिलो पटक महाभारत क्षेत्रका वनमा समेत पाटेबाघको उपस्थिति पत्ता लाग्यो । चैत्रको अन्तिम साता गैडा गणना सम्पन्न भएको छ र ५ वर्षमा गैडाको संख्या १०७ ले बढेर ७५२ पुगेको पाइएको छ । यसले जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरतलाई उत्साहित बनाएको छ ।
नेपालले सन् २००८ देखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना गरेर कार्बन व्यापारको तयारी गर्दै आएको नेपाल विश्व ब्यांकसँग १२ फागुनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारको चरणमा प्रवेश गर्न सफल भयो । वन विनाश र वनको क्षयीकरण कम गरी कार्बन सञ्चितिलाई बढाएर कार्बनडाइअक्साइड न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले प्रतिटन पाँच डलरका दरले भुक्तानी पाउनेछ । यसअनुसार सन् २०२४ सम्म नेपालले ४५ मिलियन डलर अर्थात पाँच अर्ब २० करोड ५७ लाख प्राप्त गर्नसक्छ। यो नेपालको लागि सुखद समाचार हो ।
फोहरमैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका थुप्रै घोषणाहरु गरिएपनि कोरोनाको बहाना बनाएर तिनै तहका सरकारहरु पन्छिदा फोहरबाट मोहर, फोहरबाट विद्युत र मल उत्पादन, प्लास्टिकमुक्त पालिका जस्ता कार्यक्रमहरु सेलाए । कोरोना कालमा पनि नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोकिएन, बरु तिनै तहका सरकारले गिट्टी ढुंगा कारोबारिलाई सजिलो गराइदिने कानूनी र नीतिगत छिद्र खोजीरहे ।.
मानव वन्यजन्तु द्वन्द
तराइका झापा, सिराहा, उदयपुर, सुनसरी,बारा, पर्सा, चितवन, बर्दियामा जंगली हात्तीले आक्रमण गरेर धनजनको क्षति भयो । कोशी टप्पुमा मकुना हात्तीले ठुलो क्षति पु¥यायो भने वर्षको अन्त्यतिर चितवनमा ध्रुबे हात्तिको बदमासीले चर्चा पायो । दमौली र अर्घाखाची जिल्लामा चितुवा आक्रमणका घटनाहरु धेरै भए, प्रशासन नै खटिएर चितुवा मार्ने अभियान नै चलाउनु प¥यो । राजमार्गमा गुडिरहेको बाइकबाट तानेर बाघले मानिसलाई खाएको घटनाले निकै चर्चा पायो । बाँके र बर्दियामा पाटे बाघले स्थानीय वासिन्दालाई मार्ने, घाईते बनाउने जस्ता घटनाहरु निकै भए । नरभक्षी बाघलाई मार्नुपर्ने आवाजहरु बढेपछी बाघलाई समातेर सदर चिडियाखानामा समेत पठाईयो ।
वन्यजन्तुको संख्या बढेका सुखद समाचारहरु आइरहेको बेलामा मानिस–वन्यजन्तु द्वन्दका धेरै घटनाहरु आइरहेका छन् । ओखलढुंगामा एउटा पोखरीमा २९ वटा बाँदरले हामफालेर आत्महत्या गरेको खबरले चर्चा पायो तर त्यसको पछाडिको कारणको खोजि भएन । पहाडी क्षेत्रमा बाँदर आतंकले किसानलाई सताएका खबरहरु आइरहेपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उपाय कतैबाट आएन । वन्यजन्तुको कारणले खेतीपाती गर्ने दरमा कमि आएको, बसाइसर्न बाध्य भएका जस्ता दुखद खबरहरु गतवर्ष भन्दा यो वर्ष बढी नै आए । स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारका नीति कार्यक्रममा मानव–वन्यजन्तु द्वन्दलाई घटाउने, वन्यजन्तुबाट पिडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने जस्ता कुराहरु समावेश भएतापनि वन्यजन्तुलाई वनमै रहिरहन सक्ने वातावरण निर्माण गरि मानिस–वन्यजन्तु सम्पर्क र द्वन्दलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु भने आउन सकेनन ।
समग्रमा हेर्दा वि.स. २०७७ साल नेपालको वातावरणिय क्षेत्रको लागि सुखद रहन सकेन । कोरोना कहरले संरक्षणका गतिविधिहरु संचालन गर्न कठिन भयो भने प्राकृतिक विषमताले गर्दा प्राकृतिक विपत्तीका घटनाबाट देश र देशबासी प्रभावित हुनु प¥यो । सरकार र कर्मचारीहरु विचको आपसी द्वन्दको कारणले गर्दा वन र वातावरणिय क्षेत्रमा नयाँ र ठोस कार्यक्रमहरु आउन सकेनन । वन मन्त्रीका भनाईहरु बारम्बार विवादमा आएर जगहसाई भयो । यो वर्षैभरि देशको राजनीतिक अवस्था तरल रह्यो, जसको फाइदा वन,वन्यजन्तु र खनिज पदार्थका ठेकेदारहरुले लिन पाए । देशमा पर्यापर्यटन विस्तारै फस्टाउदै गएको समयमा कोरोना कहरले गर्दा तत्कालै माथि उठ्न नसक्ने गरि थला परेको छ । पर्यटकहरु नपाएपछि संरक्षण क्षेत्र, स्थानीय पार्क, समुदायबाट संचालित मिनीचिडियाघरको व्यवस्थापनमा समेत समस्या परिरहेको छ ।
नयावर्ष हाम्रो संघारमा आएको छ । कोरोना कहर झनझन बढिरहेको छ । आउदो वर्षमा हाम्रा सामु अझ बढी आर्थिक र सामाजिक समस्याहरु पहाड बनेर खडा हुने कुरामा शंकै छैन । यी समस्याहरुबाट प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरणिय क्षेत्रमै सबभन्दा बढी असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले कोरोना र अन्य प्राकृतिक विपत्तिसंग लडिरहदा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, वैकल्पिक तथा दिगो उपयोगका कामहरु गर्नु आवस्यक छ । नयाँवर्षले सबैमा त्यो सदबुद्धि दिओस, सबैलाई शुभकामना ।
( बुटवल टुडेबाट )
आङ सान सुकीमाथि सेनाका ६ वटा नयाँ आरोप
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक आह्‍वान, मुख्यमन्त्रीले राजिनामा नदिने तर विश्वासकाे मत लिने